China na-ebi akwụkwọ igwe ihe ịrịba ama na ngwa nbipute UV flatbed emepụta na suppliers | Maishengli
Ogologo / obosara / elu: 5321mm / 2260mm / 1620mm
Ogologo / obosara / elu: 5170mm / 2837mm / 1285mm
Ezigbo ọrụ ọrụ mgbe ochie, nye aka na ntanetị ma ọ bụ ekwentị, yana ileta email site n'oge ruo n'oge.
nọmba nke otu oghere nozulu: 1280 (320 n'ahịrị nke ọ bụla, 4 ahịrị na ngụkọta),
ink dobe size: 7pl, elu-ebi akwụkwọ ziri ezi
Ngwunye ígwè niile nke axis nke nnyefe nnyefe ma na-eduzi okporo ígwè na-anabata Japanese THK abụọ usoro nduzi ụgbọ okporo ígwè iji hụ na ụgbọ ala ink na-aga nke ọma na usoro obibi akwụkwọ.
akwa ekwe ekwe akwa nwere ike belata akwa nke eriri waya, gbatịkwuo ndụ ndụ nke eriri waya ma belata mkpọtụ na-agba ọsọ nke towline;
Ekpe na aka nri nke oghere ahụ nwere ngwa ọgụ mgbochi. Mgbe a na-ezute ihe mgbochi na usoro mbipụta, igwe ga-akwụsị na-akpaghị aka ma chekwaa ihe mkpuchi ahụ n'ụzọ dị irè;
The x-axis niile ígwè Ọdịdị nke nnyefe doo na ndu okporo ígwè na-chụpụrụ site Japanese THK abụọ linear ndu okporo ígwè iji hụ na ink ụgbọ ala na-agba ndị ọzọ were were na-ebi akwụkwọ usoro;
Ricoh Gen 5 UV ngwa nbipute ụlọ ọrụ òkè dị elu nke ukwuu ulo oru nozulu, otu isi awọ ebi akwụkwọ mode 30kHz, multi-larịị isi awọ-ebi akwụkwọ;
E kewara adsorption igwe n’ozi igwe n’ime uzo isii, nke n’enwere ike ime adsorb ihe ndi ebiputa n’otu oge, ma obu gbanye ebe obula iche, ka ibelata mkpofu nke ihe ndi ozo ma ghazie ikike imeputa ego;
Igdị ike na nlezianya, nhazi okirikiri ọkachamara, dị mfe ilele na ilekọta okirikiri;
uv flatbed ebi akwụkwọ Ebipụta ihe nwere ike ịbụ: iko, seramiiki, ụlọ, aluminom mpempe akwụkwọ, osisi osisi, ụzọ ụzọ, metal panel, billboard, acrylic panel, Plexiglass, paper board, foam board, PVC ịgbasa board, corrugated kaadiboodu; mgbanwe ihe dị ka Kwanyere, kwaaji, ákwà, kapeeti, nnyapade ndetu, reflective film, akpụkpọ anụ wdg niile ụdị mpempe akwụkwọ ihe na 5 isi atụmatụ: isi mma
1.The niile-ígwè Ọdịdị ana achi achi edo ọrụ.
4. Ngwaahịa a thicker
Omenala-ebi akwụkwọ nwere ike na-ebipụta mkpa ihe, mgbe UV flatbed ebi akwụkwọ ike ibipụta ngwaahịa na a ọkpụrụkpụ nke 50 cm. Printingdị mbipụta ngwaahịa atọ abụghịzi nsogbu.
5. Irregularization nke ngwaahịa
Omenala ebi akwụkwọ na-ejedebe na ngwaahịa mgbe niile. UV flatbed ebi akwụkwọ ike ibipụta nile di iche iche nke pụrụ iche ekara ngwaahịa. Ọ bụ usoro mbipụta kachasị mma maka ọla, ọrụ aka, na ngwaahịa dị elu.
Nke gara aga: M-3220W UV Flatbed Printer
Osote: High Quality 3D Digital Inkjet UV Flatbed Printer Jade Industrial Printing Machine